ICT for Myanmar: June 2010
Hard Disk ထဲက တူနေတဲ့ MP3 File တွေ ကိုရှင်းချင်လား...လွယ်ပါတယ်
Music Fan တွေအနေနဲ့... Hard Disk ထဲမှာ MP3 file လေးတွေ ကို တယုတယသိမ်းထားတတ်မှာပဲလေ...
ဒီလိုသိမ်းထားတဲ့နေရာမှာ...များသောအားဖြင့်ကတော့...သီချင်းတပုဒ်ကို...ဟိုနေရာက ရလိုက် သိမ်းလိုက်... ဒီနေရာက ရလိုက် သိမ်းလိုက်... ဟိုလူ့ဆီက ရလိုက်သိမ်းလိုက်... ဒီလူ့ဆီက ရလိုက်သိမ်းလိုက်... ဒါနဲ့ ပဲ...သီချင်းတပုဒ် ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ Hard Disk ထဲမှာ... နေရာယူထားတာက (၃) ပုဒ် (၄) ပုဒ် ဖြစ်နေပါရော...
ဒါမျိုးတွေ သိပ်များလာရင်... အမှန်တကယ် ရှိနေတဲ့ သီချင်းက နည်းနည်းလေး... Hard Disk ရဲ့ Storage Space ကတော့... တော်တော်လေးကုန်သွားပြီပေါ့ဗျ... နောက်တခုက... Play list ကို Management လုပ်ဖို့လည်း ခက်တာပေါ့ဗျာ...
သီချင်းတွေ... ထပ်နေလား မနေဘူးလား ဘယ်လိုသိအောင်လုပ်မလဲ... တစ်ပုဒ်ချင်းစစ်မယ်ဗျာ.... မလုပ်ပါနဲ့ ... ပင်ပန်းပါတယ်... ကဲ အောက်မှာ... မိတ်ဆွေတို့အတွက်... အသုံးတည့်မယ့်.. Software လေး (၃) ခု ကို Screen Shot လေးတွေနဲ့ တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်...
အသုံးပြုနည်းလေးကိုတော့... Download လုပ်ပြီး... စမ်းကြည့်ပါတော့ဗျာ...
ပြီးရင်တော့... ပြန်ပြောပြနော်... :P
Linksys WRT120N Wireless-N Home Router ကို Reset ချနည်း
တနေ့က ရုံးမှာ...Router တလုံး ကို Reset ချပြီး... Reconfiguration ပြန်လုပ်ဖို့ အကြောင်းပေါ်လာတယ်...
ဒါနဲ့ ပဲ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တယောက်ကို Reset ချခိုင်းလိုက်တာ... တော်တော်ကြာသွားတယ် မရဘူးတဲ့...
ိထူးဆန်းတယ်ပေါ့... ဒီ Router ရဲ့ Reset ခလုတ်က နောက်နားတင်ပါ... ဒါလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Reset ဖြစ်ပါပြီပေါ့...ဘာလို့လုပ်မရတာပါလဲ...စဉ်းစားတယ်...ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်တယ်...ဟုတ်တယ်မရဘူူးဗျ...ဒါနဲ့ ပဲ ဝယ်တုန်းက User Manual ပါတယ်...ပြန်ကြည့်မှပဲဆိုတော့...Manual မှာလဲ ...ပြည့်စုံအောင်ရေးမထား... ဒီမှာပဲ... အင်တာနက်ကို အားကိုးရတော့တာပေါ့ဗျာ...
ကျွန်တော် Reset ချချင်တဲ့ Router က... Linksys WRT120N Wireless-N Home Router ပါတဲ့ဗျာ...
မြန်မာလို ရေးပေးချင်ပါတယ်... အချိန်မရတာကတကြောင်း... English လိုရေးထားတာက ပိုကောင်းတာက တကြောင်း ... နှစ်ကြောင်းပေါ့ဗျာ...မူရင်းအတိုင်းပဲ ပြန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
If you cannot get "Reply from ..." in step9above, your router is likely dead.
If you getareply in step 9, but cannot complete step 10, then either your router is dead or the firmware is corrupt.
ကဲ ... အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ...
Network Administrator တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်... ကွန်ပျူတာတွေအများကြီးကို Administration လုပ်ရပြီဗျာ...ကဲ...ကွန်ပျူတာတွေက အများကြီး...အဆောက်အအုံကလဲ...၄ ထပ် ၅ ထပ် လောက်ရှိမယ်ဗျာ... ကိုယ်က နေတာက.. အပေါ်ဆုံးထပ်... ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ ကွန်ပျူတာက...အောက်ဆုံးထပ်ဆိုရင်...ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ... ဆင်းလိုက်တက်လိုက်လုပ်မှာလား... ဒါဆိုရင်တော့သေပြီပေါ့... ကဲ... ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေက... Remote Desktop ဆိုတာကို သုံးကြတယ်ဗျာ... သူက လည်း... ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဗျ... တခုဆိုးတာက... Remote Shutdown/ Restart လုပ်လို့မရဘူးဗျာ... အဲ့ဒီတော့ Software ဖြစ်ဖြစ်... Configuration ဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းလဲမှု တခုခု လုပ်ပြီဆိုရင်. Shutdown/ Restart လုပ်ဖို့ အောက်ဆင်းလိုက် အပေါ်တက်လိုက်လုပ်မှာလား... ဒါလည်းမဖြစ်သေးပါဘူး...
ဒီတော့... ကျွန်တော် Remote Shutdown ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေး ၂ မျိုး ကို ပြောပြမယ်
၁။ My Computer ကို Select လုပ်ပြီး right click> Manage ကို Click လုပ်ပါ။
၂။ Computer Management ဆိုတဲ့ Window ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Computer Management (Local) ဆိုတာကို Select လုပ် Right Click>Connect to another computer... (or) Menu Bar က Action>Connect to another computer... ဆိုတာကို Click လုပ်ပါ။
၃။ Select Computer ဆိုတဲ့ Window ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Another computer ဆိုတာကို ရွေးပြီး... ကိုယ် Connect လုပ်ချင်တဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ အမည်ကို ရေးပါ။ (ဥပမာ...YTP - 002)၊ ပြီးရင် OK ပေါ့။
၄။ Connected ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်... Computer Management Window ထဲက Computer Mangement (Remote Computer ဥပမာ YTP - 002) ကို Select လုပ် Right Click> Properties ကိုသွားပါ။
၅။ Properties Window ပေါ်လာရင် Advanced Tab ကို နှိပ်ပါ။ Star up and Recovery အောက်က Settings ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။ Shutdown ကို နှိပ်ပါ။
၆။ Action ဆိုတာရဲ့ အောက်မှာ log off current user, shut down, restart, or power down.... force all applications to close, close hung apps, or wait for all apps to close by themselves ဆိုတာတွေကို ကြိုက်သလို... အဆင်ပြေသလို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ပြီးရင်တော့... ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲဆိုတာ ကို ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်... :P
ဒီနည်းလမ်းကတော့... DOS ပါ... သူလေးကလည်း ဟောင်းပေမယ့်... ကောင်းနေတုန်းပဲဗျ...
ကွန်ပျူတာသမားတွေ ရဲ့ အချစ်တော် လေးဆိုလည်းမမှားဘူးပေါ့ဗျာ..
ကဲ... Start>Run>cmd or Strart>All Programs>Accessories Command Prompt ကြိုက်တာနဲ့ တာ သွားဗျာ... Command Prompt Windows ပေါ်လာပြီဆိုရင်.. အောက်က စာသားလေးတွေ ရိုက်ထည့်လိုက်ဗျာ...
%windir%\_System32\_shutdown.exe -r -m \_\_Machinename
Machinename နေရာမှာတော့ Remote Computer ရဲ့ အမည်ပေါ့ဗျာ... ဒါဆိုလည်း... shutdown/ restart လုပ်တာပါပဲဗျာ...
shutdown.exe ကို command prompt ထဲမှာ switch တွေ ဘယ်လိုခံပြီး သုံးလို့ရသေးလဲဆိုတာကို Detail သိချင်ရင်... shutdown.exe /? ဆိုပြီး ရှာပေါ့ဗျာ...
ကဲ...Network Administrator/ Network Operators တွေ ဟိုပြေးဒီပြေး ဘဝက လွတ်နိုင်ကြပါစေဗျာ...
မှတ်ချက်။ ။ ခုပြောတာ Windows XP အတွက်နော်။
IT သမား တယောက်.... ကွန်ပျူတာသမားတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်... File တွေနဲ့ ထိတွေ့ရပြီဗျာ...
ဒီအခါမှာတော့... .wav ဆိုရင် Wave File, .mp3 ဆိုရင် MP3 File, .doc ဆိုရင် Word File, .xls ဆိုရင်... Excel File...စသည်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်... ပြီးတော့ ဒီလို File အမျိုးအစားတွေကို မည်သည့် Application ... Programs... Software နဲ့ ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတာကို တော့ တော်တော်များများသိကြပါတယ်...
ဒါပေမယ့်ဗျာ...တချို့ ကျွန်တော်တို့ မသိသေးတဲ့ File extension တွေ မှ အများကြီးပါပဲ...
ဒါလေးတွေကို သိစေချင်တာနဲ့ ကျွန်တော် စုဆောင်းထားခဲ့ သမျှလေးတွေကို... A to Z ပုံစံ စုစည်းပြီးတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ File extension လေးတွေကတော့ သူတို့ ဟာ ဘယ်လို File အမျိုးအစားပါ... သူတို့ကို ဘယ်လို Application... Programs... Software တွေနဲ့ ဖွင့်ရမယ်ဆိုတာလေးကို ရှင်းပြပေးထားတာပါ...
တတ်နိုင်သမျှတော့ စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ... ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးထားတဲ့ ထဲမှာ မပါသေးတာများရှိရင်လည်း... ပြောပြခဲ့ပါအုံး
တကယ်လို့ password သာ မသိတော့ဘူးဆိုရင်... Windows XP ရဲ့ Built-in features အရပြောရရင် Log in ဝင်ဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ...ဒါဆိုရင် ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်တွေ သွားပြီပေါ့ဗျာ...
ဒါပေမယ့်...ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့တော့ နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာ...
အဲ့ဒီထဲက မှ နည်းလမ်းတခု ကို ကျွန်တော်ပြောပြပါ့မယ်...
ဒီလိုဗျ... ပထမဦးဆုံး... Administrator rights ရထားတဲ့ User account တခုတော့ ရှိဖို့လိုတာပေါ့ဗျာ..
ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း... Built-in administrator account ကို သုံးလို့ရနေတယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်...
၁။ကွန်ပျူတာကို Power ဖွင့်ဗျာ
၂။ Keyboard က F8 Key ကို ၃ စက္ကန့်လောက်တော့ နှိပ်ထားဗျာ
၃။ Windows startup menu ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ Keyboard က Arrow Key တွေကို သုံးပြီး.. Safe Mode
၄။ Safe Mode ကို ရွေးပြီးပြီဆိုရင် Enter ခေါက်ပါ။
၅။ ဒါဆိုရင် Windows က Safe Mode နဲ့ Boot တက်ပြီပေါ့ဗျာ။
Welcome Screen ပေါ်လာပြီဆိုရင်... Administrator account or Administrator Right ရထားတဲ့ account တခုခုနဲ့ Log on ဝင်ဗျာ... (အဲ့... Window XP Home Edition ဆိုရင်တော့ Ctrl+Al+Del Key ကို ၂ ကြိမ် နှိပ်ပေးမှ Safe Mode မှာ administrator account ပေါ်တယ်ဗျ... Professional Edition ဆိုရင်တော့ မလိုပါဘူး။)
Log on ဝင်ပြီးလို့ Desktop ကိုရောက်ပြီဆိုရင်... အောက်က အဆင့်လေးတွေ အတိုင်းလိုက်လုပ်ပါအုံးဗျာ
၁။ Start>Control Panel>Administrative Tools ကို အဆင့်ဆင့်သွားပါ။
၂။ Computer Management ဆိုတာကို Click လုပ်ပါ။
၃။ Local Users and Groups ဆိုတာကို Double Click လုပ်ပါ။ Users ဆိုတဲ့ folder ကိုလည်း Double
၄။ ဒီနေရာမှာ ဖွင့်မရတဲ့ (သို့မဟုတ်) password မေ့သွားတဲ့ account name ပေါ်မှာ Right Click နှိပ်ပါ။
ပေါ်လာတဲ့ Pop-up menu ပေါ်က Set Password ဆိုတာကို Click လုပ်ပါ။
၅။ ဒါဆိုရင်...Password change တ့့ဲအတွက် Warning Box လေး ပေါ်လာမယ်ဗျ Proceed ကိုပဲ Click ပါ။
၆။ New Password box နေရာမှာ ဘာမှ မထည့်နဲ့ပေါ့ဗျာ... Confirm Password box မှာလည်း ဘာမှ
မထည့်နဲ့ဗျာ။ (နောက်မှ ပြန်ထည့်ကြတာပေါ့နော်)
၇။ ပြီးရင် OK... OK ပေါ့ဗျာ။
၈။ ကဲ... ဖွင့်ထားသမျှ Windows တွေအကုန်ပိတ်ဗျာ... Windows ကို Restart လုပ်ပါ။ အရင် Log in
ဝင်မရတဲ့ account ကို ဝင်ကြည့်ပါအုံး... ရမရသိရအောင်.... ကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်... Log in
ကဲအပေါ်က နည်းက မရဘူးဆိုရင်လဲ မပူပါနဲ့... Windows XP Password Remover တို့... ဘာတို့ Software တွေမှ ပေါမှ ပေါပါဗျာ... ဒါကိုမှ မရဘူးဆိုရင်လည်း...ကျွန်တော့်ဆီလာခဲ့... ဟဲဟဲ...ကြော်ငြာဝင်တာ
Windows XP ရဲ့ Built-in Administrator account မှာ password ထားသင့် မသင့်
Computer တွေ Windows တင်ပြီဆိုရင်... ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတာ ကတော့ Windows တင်နေတုန်းမှာ ဖြည့်ပေးရတဲ့... Built-in Administrator account ရဲ့ Password ကို Windows တင်ပေးတဲ့ Technician/Specialist တော်တော်များများက ထည့်မပေးလိုက်တက်ကြပါဘူး... ကိုယ်တိုင် Windows တင်တဲ့ သူတော်တော်များများ က လည်း ဒီအဆင့် မှာ မထည့်တတ်ကြပါဘူး... တကယ်တော့ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့် တခု မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့... ဒီ Built-in Administrator account ကို Password ပေးမထားလို့ကတော့... ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက် ပြီး အတော် အသင့် တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ သူ တယောက်က ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကို ၄င်း Administrator account သုံးပြီး... ဝင်ရောက်အသုံးပြုသွားနိုင်လို့ပါပဲ...
ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့... User Account ခွဲထားတဲ့ ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်ဗျာ... Windows တက်လာပြီး ရင် Welcome ပေါ်လာမယ်...ပြီးရင်... Username န့ဲ Password ထည့်ပေးရမယ်ဆိုပါတော့...ဒီနေရာမှာ Keyboard ကနေ.. Ctrl Key ရယ်... Alt Key ရယ်... Del Key ရယ်ကို ပေါင်းပြီး နှစ်ခါ နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်... Username နဲ့ Password တောင်းတဲ့ Windows လေးပေါ်လာတယ်... Username နေရာမှာ... Administrator ပေါ့... Password နေရာမှာ...Windows တင်စဉ်က password ပေးမထားတော့ ဘာမှ ထည့်မပေးပဲ Ok လုပ်လိုက်ရင်... မိတ်ဆွေရဲ့ ကွန်ပျူတာကို လုပ်ချင်ရာ လုပ်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်... ပြီးတော့...Built-in Administrator ဆိုတော့...ထင်ရာစိုင်းပြီပေါ့ဗျာ...
ကဲ မိတ်ဆွေ... နောက်ဆို Built-in Administrator account လေးကို လဲ ပစ်မထားနဲ့နော်...
အဲ့ တခုတော့ ပြောမယ်ဗျ...ဒါက Windows XP အတွက်ပဲနော်...ကျန်တဲ့ Windows တွေမှာ ဒါမျိုးလုပ်လို့မရပါဘူး။
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော်က ဆရာကြီးလဲ မဟုတ်သလို... ဆရာလေးလဲ မဟုတ်ပါဘူး...
ကျွန်တော်တို့ IT သမားတွေ ဆိုတာ နေ့တိုင်း ပေါ်ထွက်နေတဲ့...နည်းပညာတွေကို လိုက်မှီဖို့ စာအမြဲဖတ်နေရပါတယ်...ဒီလိုပါပဲ...ကျန်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာ...ဆရာဝန်...အိုဗျာ...အားလုံး အားလုံး စာဖတ်ဖို့လိုပါတယ်... ဒီလိုစာဖတ်ဖို့ကို လည်း...ဆရာဖေမြင့်က...သူ့ရဲ့ စာဖတ်သူ၏ မှတ်စုများ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှာ ဒီလိုရေးထားတာကို တွေ့မိပါတယ်...
လူသည် မနက်ထက် ညမှာ ပညာပိုရှိရမည်။
မနေ့ကထက် သည်ကနေ့ ပညာပိုရှိရမည်။
ဒီစာလေးကို blog တခုရဲ့ Side bar မှာ တွေ့မိလို့... တင်ချင်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ်ဗျာ...
ကျွန်တော်တို့...ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အလုပ်တွေချည်းပဲထိုင်လုပ်နေလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မှာလဲဗျာ...
အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ ပျင်းရိငြီးငွေ့လာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်...အပန်းဖြေချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်...တခါတလေကျတော့လည်း...ရုပ်ရှင်ရုံမှာပြတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတွေကို ရုပ်ရှင်ရုံမှာ မကြည့်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်...ပေါ့ဗျာ...အင်တာနက်က နေ.. ဗွီဒီယိုတွေ...Download ချပြီး ကြည့်ကြပြီဆိုပါတော့...
ဒီအခါမှာတော့... Media Player လေးတွေကို လိုအပ်လာပြီလေ.. ဒီတော့ စာဖတ်သူက ပြောမယ်ဗျာ...
Media Player များ Windows မှာ ပါပြီးသားပဲလေပေါ့... မဟုတ်ဘူးဗျ...ကျွန်တော်ကတော့...Windows က ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ Media Player ကို ဘယ်လိုမှ သဘောမတွေ့နိုင်ဘူးဗျာ...
ဒီမှာ... KM Player တဲ့ဗျ... Korea ကထုတ်တယ်နဲ့တူပါတယ်...
File size: 14.22MB (14,913,925 bytes)
Last Memory Function လေးပါတယ်ဗျာ... DVD Movie တြွေကည့်ရင်... Subtitle တွေကို... ဘယ်အချိန်မှာ ဘာစကားပြောတယ် ဆိုတာကို Subtitle Explorer ဆိုတာလေးနဲ့ လည်းကြိုကြည့်နိုင်တယ်ဗျာ...
နောက်ထပ်ကြိုက်တာလေးတခုက..သူက Windows နောက်တခု ဖွင့်လိုက်လဲ သူ့ Window လေးက မြင်ကွင်းကနေ ပျောက်မသွားဘူးဗျ...
ကျန်တာတွေကိုတော့ ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ်ပဲ ကလိကြည့်တော့ဗျာ
ကဲ... လိုချင်ရင်... အောက်က ပုံလေးတွေရဲ့ အောက်မှာ Download KM Player ဆိုတာလေးရှိတယ် အဲ့ဒါလေးကို နှိပ်ဗျာ...
အောက်မှာတော့ သူ့ရဲ့ Screen Shot လေးတွေပါ။
Google ကပေးတဲ့ Software တွေထဲက မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Software လေး တခုကို ညွှန်းချင်ပါတယ်။ Picasa Software လေးပါ။ Photo Viewer ဆိုပေမယ့် အသုံးတည့်တာတွေ များပါတယ်။
၁) Web ပေါ်ကို ဓါတ်ပုံတင် Upload လုပ်လို့ရခြင်း၊
၂) မိမိစက်ထဲတွင် ရှိသော ဓါတ်ပုံများကို Email ပေးပို့နိုင်ခြင်း၊
(ဓါတ်ပုံ ပို့ တဲ့နေရာမှာ မြန်ဆန်ပုံကတော့ ဗျာ... Modem နဲ့ သုံးတဲ့ အင်တာနက်မှာတောင် တော်တော်မြန်တယ်)
၃) Print ထုတ်ရာတွင် အထူးကောင်းမွန်ခြင်း၊
( Photo Viewer ဆိုပေမယ့်... Editing လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဗျ... နည်းနည်းပါးပါးပေါ့လေ)
၄) Export လုပ်နိုင်ခြင်း၊
၅) Blog ကို တန်းတင်နိုင်ခြင်း၊
၆) Collage ခေါ် ပုံများကို ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊
၇) Movie လုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် Youtube ကို တင်နိုင်ခြင်း၊
၈) Goolge Earth တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊
(Geo-Tag function ဆိုရင်... ဒီဓါတ်ပုံဟာ ဘယ်နေရာ... ဘယ်အချိန်မှာ ရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတောင် သိနိုင်တယ်ဗျ)
မိမိ အကြိုက်ဆုံးကတော့ စက်ထဲမှာ ရှိသမျှ ပုံများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ရှာဖွေ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။(ဒါပေမယ့်လည်း... တခါတခါတော့ USB Drive လိုမျိုး Storage Drive တခုခု တပ်တိုင်း Scanning လုပ်တာတခုတော့လည်း စိတ်ထဲသိပ်ဘဝင်မကျဘူးဗျာ)
ပုံကိုလဲ အကြီးချဲ့ ကြည့်စရာ မလိုပဲ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေး တစ်ခု ဖြစ်တဲဲ့အတွက် အရေးတယူ ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ သုံးရင်း သုံးရင်း သုံးရမည့် နည်းလမ်းများကို သိလာပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ဝင်စားရင် အောက်က Download Picasa ဆိုတာလေးကို Click လုပ်ပေါ့ဗျာ။
အောက်မှာတော့ သူ့ ရဲ့ Screen shot လေးပါ။
Websites To Watch FIFA World Cup 2010 Live Online For Free
မနေ့က ဘောလုံးပွဲထိုင်ကြည့်ရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက် က မေးလာတယ်... Online ကနေ ကြည့်လို့ရမယ့် Site လေးတွေပေးပါအုံးတဲ့... ဒါနဲ့ ပဲ Goggling လုပ်လိုက်တယ်လေ...
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း... FTTx ဆိုတဲ့... Service တခုကို သုံးလို့ရနေပါပြီ...
သူက ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့... Triple Play Service ဆိုတာကို လုပ်ပေးပါတယ်တဲ့..
ဒီတော့ Triple Play ဆိုတာ ဘာလဲ.. ဆိုတာကို ရှင်းပြဖို့ လိုလာပြီပေါ့...
Triple Play ဆိုတာဟာ Telecommunication Networking Field က ဝေါဟာရတစ်ခုပါ။
အထူးသဖြင့် NGN ပေါ်မှာ Data + Voice + Multimedia သုံးမျိုးစလုံး ပေးနိုင်တဲ့ service ပါ။
Data Service မှာဆိုရင် Broadband (xDSL, Wi-Max, WLL, ...) Internet Access, Hot-spot, GPRS, စသဖြင့် ပေးနိုင်တယ်။
Voice ကတော့ telephone services (PSTN, CDMA, GSM, WCDMA, IN, 3G) တွေနဲ့ VoIP ကိုပါ ပေးနိုင်တယ်။
Multimedia ဆိုတာကတော့ IPTV, Video Conference, စတဲ့ service တွေကို ပေးနိုင်တယ်။
အဲ့ဒီ service သုံးမျိုးစလုံး ရတဲ့ Telecom Network ကို Triple Play Network လို့ခေါ်တယ်။
Triplay Play Network ရဲ့ Sample Structure နမူနာပုံလေးတွေကို အောက်မှာပြထားပါတယ်။
GPRS က mobile phone (GSM, CDMA) တွေပေါ်မှာ Internet Access ရအောင် လုပ်ပေးတဲ့ service ပါ။
Hot-Spot WiFi wireless technology ကို အသုံးပြုပြီး Internet Access ပေးတဲ့ နေရာတွေကိုခေါ်ပါတယ်။
ဥပမာ လေဆိပ်လို မီးရထားဘူတာရုံလို နေရာမျိုးတွေမှာ Hot-Spot ရှိနိုင်တယ်။ အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာ အင်တာနက်သုံးချင်ရင် ကိုယ်. ရဲ့ Laptop ဒါမှမဟုတ် PDA ကိုသုံးပြီး အင်တာနက် ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်။ ဒီလိုအသုံးပြုနိုင်အောင်လို့ SP (Service Provider) ကဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ SP မရှိရင်တော့ သုံးလို့မရဘူးပေါ့။
3G (Third Generation Mobile phone network)
xDSL (Refers collectively to all types of Digital Subscriber Lines)
ဒီနေ့တော့ အချိန်လေးရတုန်း အထူးသဖြင့် Electronics Engineer ၊ သချင်္ာအထူးပြုသမား တွေအတွက်
မိမိတို့စာတမ်းများကို ပြုလုပ်တဲ့အခါ Formula တွေကို Miscrosoft Office ထဲလွယ်လင့်တကူနဲ့ရေးထည့်နိုင်ဖို့အတွက်
အသုံးလိုတဲ့ plug in programm လေးတခုကို ဝေမျှချင်ပါတယ် အထူးသဖြင့် စာသင်သမားများတွက် အသုံးတည့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်..
အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် Math Type ဆိုတာ
Microsoft Word, PowerPoint အစရှိသော Office file များထဲကို
Formula များ၊ Office file ထဲမှာမပါတဲ့ အက္ခရာများကို ဒီဆော့လ်ဝဲအကူအညီနဲ့ ရိုက်ထည့်နိုင်အောင်
အသုံးပြုလို့ ရတဲ့ Program လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်...
အောက်မှာ ပုံနှင့်တကွ တစ်ခုချင်းစီ ရှင်းပြပါမယ်..
Math Type ဆော့လ်ဝဲကို run ပြီးတာနဲ့ Office file တွေရဲ့ tool bar မှာ Math type ဆိုပြီးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲဒီနေရာကို Click လိုက်တာနဲ့ အောက်ကပုံအတိုင်းထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်
မိမိ formula ထည့်လိုတဲ့နေရာကို ရွှေးချယ်ပြီး Click ပေးပြီးထည့်လိုက်ယုံပါဘဲ
ရိုက်ပြီးသားဖော်မြူလာကိုလည်း ကလစ် နှစ်ချက်ထောက်ပြီး လွယ်လင့်တကူ
ပြင်နိုင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။
Microsoft office 2007 နဲ့ဆိုပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်..
Window XP နဲ့ Vista အတွက် နှစ်မျိုးလုံးကို တဖိုင်တည်းနဲ့ထည့်ပေးထားပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေ
ကဲ... Drive လေးကို Encrypt လုပ်တာတော့ရပြီဗျာ... Decrypt လုပ်ကြည့်ကြရအောင်....
Start>Control Panel>All Control Panel Items>BitLocker Drive Encryption ဆိုတဲ့နေရာထိသွားမယ်ဗျာ
BitLocker Drive Encryption ဆိုတာကိုရှာ တွေ့ရင် Click လုပ်မယ်
ဒါဆိုရင်... ကိုယ့်စက်မှာ တပ်ထားတဲ့ Storage Drive တွေကို ပြထားတဲ့ Windows လေးပေါ်လာပြီပေါ့ဗျာ
ဒီနေရာမှာ...BitLocker နဲ့ Encrypt လုပ်ထားတဲ့ Drive ဆိုရင်.. ဘေးနားမှာ Unlock Drive ဆိုတာလေး ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဗျာ... အဲ့ဒီစာလေးကို Click ဆက်လုပ်ဗျာ... ဒါဆိုရင် ... Drive ကို Encrypt လုပ်တုန်းက
ပေးခဲ့တဲ့ Password ကို ထည့်ခိုင်းတဲ့ Windows လေးပေါ်လာမယ်ဗျာ...
ကဲ ... ထည့်ပေးလိုက်ပါအုံး... ပြီးရင်.. Unlock ဆိုတာလေးကို Click ပေါ့ဗျာ...
ဒါဆိုရင်... Drive ကို Decrypt လုပ်ပြီးပြီပေါ့ဗျာ...
Drive Unlock ဖြစ်သွားပြီပေါ့...
နောက်တဆင့်က ပုံ (၆) မှာပြထားသလို Start>Control Panel>All Control Panel Items>BitLocker Drive Encryption ဆိုတဲ့နေရာကိုပြန်သွားမယ်...
Turn Off BitLocker ဆိုတာကို ရှာမယ်...တွေ့ရင် Click လုပ်ဗျာ...
ဒါဆို ပုံ (၇) မှာပြထားတဲ့ BitLocker Drive Encryption ဆိုတဲ့ Window တခု ပေါ်လာမယ်... အဲ့ဒီမှာ.. Decrypt Drive ဆိုတာကို Click လုပ်ဗျာ... ပုံ (၈) မှာပြထားသလို Decryption... ဆိုတဲ့ Window လေးပေါ်နေမယ်... အချိန်တခုလောက်တော့ စောင့်ပေါ့... ပြီးသွားရင် Close ပေါ့
လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါသေးတယ်ဗျာ... အားလုံးပဲ ကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်...
မှတ်ချက်။ ။ Drive တွေကို Encrypt (or) Decrypt လုပ်နေချိန်မှာတော့ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပေါ့ဗျာ... ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ရပ်လိုက်တာတို့... USB Drive ဆိုရင် ဆွဲဖြုတ်ပစ်လိုက်တာတို့တော့ မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်... စိတ်မရှည်ရင် မလုပ်ဖို့ ကြိုတင်ပြီး သတိပေးပါတယ်...စောင့်ရတာ ကို သည်းမခံနိုင်လို့ ရပ်လိုက်မယ်... ဆွဲဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့... ဟဲဟဲ.. At your own risk ပေါ့နော်...
ဒီကနေ့ ခေတ်မှာ... ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့ သူတော်တော်များများဟာ USB Storage Drive တွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးလာကြပါပြီ...USB Storage Drive တွေရဲ့ Data သိမ်းဆည်းနိုင်မှုကလည်း မယုံနိုင်လောက်အောင်ပဲ တိုးတက်လာတယ်လေ... ဒီတော့... USB Storage Drive ထဲက Data ရဲ့ လုံခြုံရေးကိုလည်း...ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာရပြီပေါ့ဗျာ... ဘာလို့လဲ... ဒါလေးတွေက အလွယ်တကူ မေ့ကျန်ပျောက်ဆုံးနိုင်တယ်လေ... ပျောက်သွားလဲ... အသစ်တခု ပြန်ဝယ်ဖို့ က စျေးက လက်လှမ်းမှီတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေတယ်လေ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့... ကိုယ့် Data လေးကတော့ အရေးကြီးတယ်လေ... ဟုတ်တယ်ဟုတ်...
ဒါကို Microsoft ကလည်းသိပါတယ်ဗျ... Window Vista မှာ ကတည်းက BitLocker ဆိုတာလေးကို ထည့်ပေးခဲ့တယ်လေ... ဒါပေမယ့်သူက... OS တင်ထားတဲ့ Hard Drive ရဲ့ Partition ကိုပဲ Encrypt လုပ်ပေးနိုင်တာဗျ... အခု Window7ကျတော့မှ... USB Storage Drive တွေအတွက်ပါ... Encrypt လုပ်ဖို့ ထည့်ပေးလာတာလေ...
ဒီတော့ BitLocker နဲ့ USB Storage Drive ကို Encrypt လုပ်ကြည့်ကြစို့လားဗျာ...
အခုကျွန်တော်က Window7တင်ထားတဲ့ စက်မှာ USB Storage Drive တပ်ပြီဗျာ...
တပ်ထားတဲ့ USB Drive ပေါ်မှာ Right Click လုပ်တယ်ဗျာ…ပေါ်လာတဲ့ Pop-up menu ပေါ်က Turn on Bitlocker ဆိုတာကို Select လုပ်တယ်ဗျာ ပုံ (၁) မှာကြည့်ပါ
ဒါဆို အောက်က ပုံ (၂) လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်… Useapassword to unlock the drive ဆိုတဲ့ Check box လေးကို အမှန်ခြစ်လေးခြစ်ပါ…. Password လေး ထည့်ပေးဗျာ… တခုတော့ရှိတယ်ဗျ… Password က အနည်းဆုံး (၈) လုံးရှိရမယ်နော်….
ပြီးရင်တော့ Next ပေါ့။
ပုံ (၃) လေးပေါ်လာပြီနော်… ဒီအဆင့်မှာ ၂ မျိုးထဲက ၁ မျိုးကိုရွေးပေးရမယ်ဗျ… ဒါမှ Next ကို ဆက်သွားလို့ရမှာ…ဘာလို့လဲဆိုတော့… password မေ့သွားတာမျိုးကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်တဲ့ဗျာ…
ကဲ Next လုပ်ပြီးရင်တော့ Drive ကို စပြီး Encrypt လုပ်ပါတော့မယ်… ပုံ (၄) မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Start Encrypting ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ပုံ (၅) မှာပြထားသလို နဲနဲတော့ စောင့်ပေါ့ဗျာ… Encrypting Process ပြီးပြီဆိုရင်… ပုံ (၆) မှာပြထားသလို Close ပေါ့။
နောက်တော့လည်း အချိန်များရသေးရင် အသေးစိတ်တွေ ထပ်ရေးပါအုံးမယ်…